काठमाडौँ, १९ वैशाख, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिँचाइसम्बन्धी आठौँ एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो ।
तीनदिने सो सम्मेलनमा नेपालसहित यस क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका ३०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक आयोजित सो सम्मेलनमा सिँचाइमार्फत कृषि उत्पादन कसरी वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने भन्ने रहेको छ ।
नियोगका अध्यक्ष फेलिक्स राइन्डर्सले नेपालको जलस्रोत नै आर्थिक विकासको आधार हुने हुँदा पानीको अधिकतम सदुपयोगका ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले सिँचाइ तथा जल व्यवस्थापनमा थप विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख १९, २०७५१५:१६
माओवादी बैठकमा प्रचण्डकाे ब्रिफिङः जनयुद्द् र जबजकाे कुरा मिल्याे
काठमाडौँमा फेरी चिसो बढ्यो ! मंगलबार सम्म देशैभरको मौसम कस्तो होला ?
राप्रपा (संयुक्त) का दुवै अध्यक्षको एक स्वर – अब पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन हुँदैन !
म्यान्माका राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता
“विप्लव” र वैद्यसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रि तयार ! सिके राउतसँग भने कुनै छलफल नहुने !
सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने बाबुरामको चेतावनी ! देशभरीका नेता कार्यकर्तामा व्हिप जारी।